【IYAQHUBEKA】 Yakhiwe ngensimbi engagqwali engagqwali engu-304 iyenza ingavikeleki futhi ibe yisibopho esisindayo, le hanger yethawula yangasese kanye nokugcinwa kwephepha kwenziwa kahle ukuba kuphele iminyaka, kanti ukwakheka kwayo okumelana nokugqwala kuqinisekisa ukuthi amathawula akho azohlala ecacile futhi ehlanzekile!
【AKUKHO RUST】 Ukuthuthukisa ukuphela kwe-MATTE BLACK bekungeke kubonise noma yimaphi amabala futhi kumelane nemihuzuko yosuku, ukuvezwa okuntekenteke kwenza ukujoyina kungabi lula ukugqwala, ukugcinwa kwansuku zonke kulula, kugcina ukubukeka kwayo kulula futhi kungabi nasici.
Design ISITAYELA NOKUPHEPHILE】 Idizayini eyindilinga eyisisekelo enefashini ye-rustic engeza usesho oluhle kakhulu noluzuzayo lokuhlobisa kwakho kwendlu yangasese, imiphetho ebambekayo yamaraki wethawula noma isibambi sephepha, vikela umzimba wakho ekuziklwebheni, uvikelekile ukuthi intsha iwusebenzise.
SA UKULONDOLOZA ISIKHALA ring Faka indandatho yensimbi yokugoba & indawo yokuphepha ephethe ingalo evulekile yengalo, isilinganiso esilinganisiwe, kepha kepha unikeza isikhala esikhulu samakhabethe kuphathi wakho, ithoyilethi / ikhishi, indawo yokubungaza noma ipulazi.
AS KULULA UKUFAKA】 Kuqonde ngqo ukufaka odongeni ngemishini egcwele kanye nezikhombisi-ndlela ezihlinzekiwe. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi ephezulu, lezi ziqinisekiso zokukhiqiza imishini yangasese.
SKU: 4030801B Categories: izesekeli, Izinto Zokugeza Tags: matt uchungechunge omnyama ongashadile, minimalist yesimanje